Otoplasty - plastika, fanitsiana ny sofina. Lasopy otoplasty, tavy lava plastika, lava-peratra
Otoplasty - ny fomba maoderina indrindra amin'ny fanitsiana ny sofina
Ny endriny, ny habeny sy ny toerana misy ny sofina dia misy fiantraikany amin'ny sary ankapobeny. Ny fahavoazana sasany dia afaka manimba ny endriny na dia endrika tsara tarehy sy mampihomehy aza. Mba hanitsiana ireo tsy fahampiana ireo, ny fanampiana amin'ny fandidiana dia manampy amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny alalan'ny fanampiana azonao omena ireo fepetra ilaina ao anatin'ny fivoriana iray monja.
Otoplasty - famantarana
Ny fizotry ny asa atao dia mizara ho fomba fanao etetika sy mamerina. Ny vondrona voalohany fanodikana dia natao hanitsy ny endrika sy ny toerana misy ny sambo. Ny plastisma amin'ny sofin'ireo karazany faharoa dia midika fa ny fiverimberenan'ny fikarakarana dia ny famerenana ny taovam-pandrenesana (na tsy misy).
Fanehoan-kevitra momba ny paikady:
ny takaitra manify (eo anoloana) ny antiflora sy ny aretin-koditra;
Fiovana lehibe eo anelanelan'ny loha sy ny akorany;
ny endriky ny sofina;
ny tsy fisian'ny (mividy na mampiavaka) ny tranonkala tsirairay na ny taova manontolo.
Methods of otoplasty
Ao amin'ny fanafody maoderina dia mampiasa teknika sigara roa: laser sy klasika (scalpel). Ny fanitsiana ny sofina amin'ny fomba voalohany dia heverina fa fanodikodina kely fotsiny, ka izany no malaza indrindra amin'ny marary. Ny otoplastika dia ambany kokoa amin'ny laser amin'ny lafiny estetika, saingy amin'ny toe-javatra sasany, ny fampiharana azy dia mety kokoa. Ny teknikan'ny skalpel dia tena ilaina amin'ny fahavoazana lehibe amin'ny sofina, ny tsy fisian'ny ampahany na ny akorany manontolo.
Lasibatry ny otoplasty
Ny endriky ny volavolam-panitsiana natao dia natao amin'ny alalan'ny taratra tariby mitodika. Lasopy otoplasty no fomba tsara indrindra, azo antoka sy mahomby amin'ny fanitsiana ny endriky ny sofina. Ny fisarahana dia mendri-kaja sy kely kokoa noho ny fidirana amin'ny fitsaboana klasika, ka tsy hisy marika hita maso. Noho ny hafanana ambony amin'ny laser beam, ny vataingitra simba ao amin'ny hoditra dia mamehy (voajanahary) avy hatrany. Izany dia miantoka farafahakeliny ny rà nateraky ny fanodinana ary manakana ny aretina amin'ny ratra, ny fanindroany ary ny fanasitranana.
Ny dingana serivisy dia atao amin'ny scalpel eo amin'ny ankapobeny na eo an-toerana (matetika) anesthesia. Ny otoplasty klasika amin'ny sofina dia atolotra ho an'ny fanodinan-doha mavesatra ny kalsa, ratra mafy na tsy fahampian'ny kodiarana. Ny marary sasany dia tia ny teknolojia scalpel na dia misy hadisoana kely aza noho ny vidiny ambany. Ny otoplasty Chirurgie dia mamokatra lasery mitovy amin'izany, saingy rehefa avy eo dia misy marika marobe kokoa. Miaraka amin'ny fanodikodinam-panafody, ilaina ny fotoana fanarenana lava ao amin'ny hopitaly.
Miomana amin'ny otoplasty
Ny alina mialoha ny fandidiana dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny dokotera amin'ny antsipiriany ary milaza aminy araka izay tratrany momba ny zavatra andrasany sy ny vokatra tadiavin'ilay fikarakarana. Ny fanitsiana ny sofina dia nahomby, tokony hijery fandinihana lalina ianao, izay ahitana ny lisitry ny fitsapana:
urine, ra (iombonana);
rà ho an'ny sifilis, ny immunodeficiency ary ny hepatita.
Ankoatra izany, ny fandalinana fitaovam-pitaovana sy ny fitaovana elektronika dia atao - fluorographie, electrocardiography. Raha tsy misy fanoherana ny fanodikodinam-panafody, ny mpandidy dia mamaritra ny firindran'ny marary amin'ny fanehoan-kevitra mahazatra amin'ny fanafody samihafa anesthetic ary manamarina ny fanombohan'ny hoditra amin'ny fanabeazana sy ny fitomboan'ny taratra keloid .
Rehefa voafidy ny daty fandidiana dia manomboka ny fampiofanana fototra:
Mandritra ny 14 andro dia atsaharo ny fanafody izay manova mivantana na tsy mivantana ny fahafaha-mandanjalanjan'ny ra.
Mialà amin'ny toaka sy ny sigara (temporaly).
Alohan'ny handehanana mivantana (4 ora na aloha), aza mihinana na misotro.
Sasao tsara ny sofinao sy ny volonao.
Raha toa ka mahavita ny fanodikodinana tanteraka sy ny fahafaham-po tanteraka amin'ny marary miaraka amin'ny vokatra azony dia omen'ny dokotera soso-kevitr'ireo mpanampy ary manoratra ny tompon'ny "vaovao". Indraindray ianao tsy afaka manatratra ny vokatra faniriana aesthetic avy hatrany. Ao anatin'izany toe-javatra izany, dia ilaina ny otoplasty averimberina. Ny fanitsiana farany dia tsy voatendry raha tsy aorian'ny fanasitranana tanteraka ny vatana sy ny fifindran'ny kodiarana.
Ahoana no anaovan'ny plastika ny sofina?
Misy karazany maherin'ny 150 ny karazana fandrefesana, karazana voafaritra voafaritra, ny sakany sy ny lavany dia voafaritra amin'ny mpandidy tsirairay. Ny fotoana tsy mampatahotra izay miaraka amin'ny otoplasty dia ny tombo-kase. Ny ratra izay manome alalana amin'ny cartilage dia tsy maintsy entina miaraka amin'ny lohahevitra ara-pahasalamana, izay matetika miteraka ratra. Indraindray ny laser-tadi-tsakafo dia takiana mba hanafoanana na hamongorana tanteraka azy ireo.
Ny fampidirana kavina na tonelina masiaka dia mitarika ho amin'ny fiparitahana, fanesorana na fery hafa amin'ny hoditra. Ny fanitsiana ny kavina koa dia takiana amin'ny fahasimbana eo amin'ny môtônika, indrindra fa ny banga. Ny otoplasty toy izany dia tanterahana amin'ny dingana 2:
Fitaovan'ny hoditra mihoatra. Amin'ity dingana ity dia efa nesorina koa ny mararin'ny taonjato maromaro sy ny fitomboan'ny keloid.
Foto. Ny dokotera dia mamorona ny andrana sy ny haben'ny lobe, ny ravin 'ny fisamboarana dia mifatotra tsara amin'ny loha-sivana.
Fandidiana amin'ny sofina
Io fihenam-bidy io dia ny fiasana amin'ny hoditra, ary amin'ny fibra fonosana. Miankina amin'ny fahasarotan'ny aretina ny otoplasty amin'ny tonelina dia maharitra 30 ka hatramin'ny 120 minitra ary tanterahana amin'ny anesthesia eo an-toerana na ankapobeny. Mandritra ilay dingana, ny mpandidy dia manasongadina ny valindrihan'ny sofina (izay mifatotra amin'ny loha) ary mahazo miditra amin'ny cartilage. Ny manam-pahaizana manokana dia manala na mamoaka azy io mba hanomezana ny sombin-tsininy tsara, hanitsy ny toerany sy ny lanjany eo amin'ny karandohany. Nositranina ny tsindrona, ary ny sofina voatana dia voatsindry amin'ny fikolokoloana mifatotra.
Otoplasty - vanim-potoan-tseranana
Amin'ny fiafaran'ny fanodinkodinam-panafody, ny dokotera dia mitandrina ny faritra simba rehetra miaraka amin'ny vahaolana antiseptika ary mihinana fanafody fanasan-damba. Ny tampon-tsoratry ny alim-bary manokana miaraka amin'ny fananana entin-javatra dia alefa eny amin'ny lakandran-tsofina mba hisorohana ny aretina sy ny fiterahana. Ny fandefasana ny otoplasty dia manampy amin'ny fanamafisana ny sofina amin'ny toerana mety, fa koa ny fametrahana ireo fitaovana amin'ny vahaolana ara-pahasalamana.
Amin'ny hetsika tsotra dia afaka hody ny marary aorian'ny ora vitsivitsy. Raha toa ka sarotra ny fomba fiasa, ary ny sofin'ny olona iray manimba ny otoplasty dia hijanona mandritra ny 1-7 andro ao amin'ny hopitaly. Mandritra io fotoana io, ny dokotera dia manara-maso ny fanasitranana ireo teboka, manao fanatanjahan-tena tsy tapaka ary manova fanasan-damba tsy tapaka, mandidy fitsaboana ara-pahasalamana mahomby.
Otoplasty - vanim-potoana fanarenana
Manana 3 herinandro ny fiterahana, ary ny tsy fahitana ny fandidiana fandidiana dia mitranga mandritra ny 4-6 volana. Ny sofina rehefa otoplasty dia afaka manindrona sy manenjika. Mba hampijanonana ny marary mampalahelo dia mametraka fanaintainana tsy misy fanafany, izay tokony hatolotra isan'andro in-2 isan'andro. Edema taorian'ny otoplasty dia nanjavona ho an'ny 4-6 herinandro.
Torohevitra ho an'ny fanarenana haingana:
Mandritra ny herinandro (farafahakeliny), dia mitafy biriky foana. Esorina izy io raha tsy miova fanasan-koditra sy ny tampom-pitsaboana (1 fotoana ao anatin'ny 2-3 andro).
Aza manasa ny volonao mandritra ny 10-14 andro.
Mandà tsy hanao fanatanjahan-tena mandritra ny 3 herinandro.
Aza misalasala mitaratra masoandro.
Aza mandeha any amin'ny dobo sy ny sauna mandritra ny 1.5 volana.
Ataovy azo antoka ny fitsidihana ilay mpandidy taorian'ny nanesorana ireo tetezana (7-9 andro) ary enim-bolana aorian'ny fanodinana.
Ny vokatry ny otoplasty
Ny hatsaran'ny asa, ny vokatra sy ny aesthetics dia miankina tanteraka amin'ny fahaiza-manaony sy ny traikefan'ilay dokotera. Noho ny otoplasty havanana dia maro ireo olona no nanala ny sompitra momba ny endrika tsy manintona ary nanamafy ny toe-piainany ara-psikolojika, nanandratra ny tenany ho ambony. Raha toa ny dokotera iray tsy nahazo alalana nanao ny fandidiana, dia mety tsy ho hafahafa fotsiny ny vokany, fa mety hampidi-doza ihany koa.
Ny otoplasty tsy nahazo alalana dia misy ny fanaintainana manaraka:
Ny bakteria amin'ny fiterahana amin'ny fiterahana tampoka;
ny endriky ny tsiranoka amin'ny alikaola;
famolavolana marary keloid;
perichondritis ( fanindroan'ny cartilage);
ny fihenan'ny endriky ny sofina.
Lactobacterin na Bifidumbacterin - inona ny fahasamihafana?
Tratry ny fery malemy amin'ny tongotra - fitsaboana
Ny lymphostasisan'ny rantsana ambany - ny soritr'aretina
Thrombus amin'ny tongotra - soritr'aretina
Psoriasis no fitsaboana tsara indrindra
Ahoana no hanasitranana tenda mandritra ny 1 andro?
Marmalade of pears
Volom-bolamena - Angano tany Gresy fahiny
Fitafiana ririnina ho an'ny vehivavy
Tremorin'ny zaza vao teraka
Ahoana no hanatsarana ny kalitaon'ny atody?
Ahoana no fisafidianana ny fitaovana ho an'ny ordinatera?
Thrills - fanatsarana
Fihetsiketsehana eo amin'ny sary
Ilaina ve ny manarona ny akoho amin'ny ririnina?
Propolis - fananana medikaly
Salady mamy sy heniheny